'अब उप्रान्त पार्टीको कुनै पनि औपचारिक बैठकमा सामेल हुँदैनौं,' पौडेलले भने, 'देशैभरका नेता कार्यकर्तासँग छलफल गरेर हाम्रो आगामी रणनीति तय गर्नेछौं । त्यही कार्यक्रमअन्तर्गत पुस २१ गते जिल्ला सभापतिहरूसँग बस्ने निर्णय गरेका छौं ।'
२०३३ सालको पुस १६ गते नेपाली कांग्रेसको इतिहासमा महत्त्वपूर्ण दिन थियो । त्यो दिन कांग्रेसकै नेताहरूको शब्दमा 'जननायक' मानिने बीपी कोइरालाले राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति लिएर भारतबाट नेपाल फर्किका थिए । त्यही आलोकमा नेपाली कांग्रेसले प्रत्येक वर्ष पुष १६ गते राष्ट्रिय मेलमिलाप दिवस मनाउने गर्छ ।
नेताहरूको आन्तरिक लडाईंका कारण २०७६ सालको पुस १६ गते (बुधवार) को मेलमिलाप दिवस खल्लो बन्न पुगेको कांग्रेस नेता कार्यकर्ताहरूले टिप्पणी गरेका छन् । लोकान्तरसँग कुरा गर्दै विद्यार्थी नेता दीपक भट्टराईले बुधवार भने, 'आज कुनै कार्यक्रम पनि भएनन्, निकै खल्लो लागिरहेको छ ।'
'नेताहरूको स्वार्थको लडाईंका कारण आजको मेलमिलाप दिवस खल्लो बन्न पुग्यो, यसले नेता कार्यकर्ता र कांग्रेसका शुभचिन्तकहरूमा एकदमै नराम्रो सन्देश गइरहेको छ,' उनले लोकान्तरसँग गुनासो पोखे ।
एकातर्फ समग्र कांग्रेसको धारणा यही हो भन्दै शर्माले पत्रकार सम्मेलन गरेका थिए भने अर्कोतर्फ असन्तुष्ट नेताहरू छुट्टै बसेर 'नयाँ ढंगबाट अघि बढ्ने' रणनीति तय गर्दै थिए ।
'४४ औं राष्ट्रिय मेलमिलाप दिवसको अवसरमा, दिदीबहिनी र दाजुभाइहरू सबैलाई हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु,' पौडेलले लेखेका छन्, 'आज राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भमा राष्ट्रिय मेलमिलापको आवश्यकता र महत्त्व अझ बढेको मैले महसूस गरेको छु । ऐतिहासिक दिनको स्मरणमा मनाइने यो दिवसले हामी नेपालीको आत्मीयता, आपसी सद्भाव, विश्वास र एकता अझ घनिभूत हुने र हाम्रो राष्ट्रियता बलियो हुने विश्वास लिएको छु ।'
यसलाई कतिपय नेताहरूले संस्थापन इतरपक्ष नरम भएर प्रस्तुत हुन खोजेको रूपमा प्रष्ट्याउन खोजेका छन् भने कतिपय निर्वाचित केन्द्रीय समितिको निर्णय नमानेर पौडेलले नै मेलमिलाप नीतिको 'मजाक' उडाएको टिप्पणी गर्छन् ।
देउवापक्षीय एक केन्द्रीय समिति सदस्यले लोकान्तरसँग भने, 'विधान कहाँ मिचिएको छ भनेर उहाँहरूले प्रस्ट भन्न सक्नुभएको छैन । कांग्रेसजस्तो लोकतान्त्रिक पार्टीमा विधि विधानविपरीत बार्गेनिङ गरेर उहाँहरू शक्तिमा आउन खोज्नु विडम्बना हो । मेलमिलाप नीतिको मजाक उडाउने तर फेसबूकमा भने सबैको प्यारो बन्न खोज्ने ?'
'सभापतिले संसदले बहुमतका आधारमा गरेको निर्णयलाई गलत भन्ने नैतिकता राख्नुहुन्न,' लोकान्तरसँग कुरा गर्दै डाक्टर कोइरालाले भने, 'पार्टीभित्र बहुमतका आधारमा निर्णय गरेर अघि बढ्ने तर संसदले बहुमतका आधारमा गरेको निर्णय गलत भन्ने, यस्तो पनि हुन्छ ? यदि यस्तो हो भने, पार्टीमा बहुमतले गरेको निर्णय गलत हो भन्ने अधिकार हामीमा छ ।'
डाक्टर कोइरालाले महाधिवेशन कांग्रेसको उत्सवजस्तै भएको बताए । 'महाधिवेशन भनेको उत्सव मनाउने कुरा हो,' उनले भने, 'सभापति देउवा चुक्नुभयो । बहुमतका आधारमा निर्णय गर्नुभयो । अल्पमतको कदर गर्नुभएन । हामीले त्यो उत्सव मनाउन पाएनौं ।'
'उहाँले आफूलाई सबैको सभापति बनाउनुभएन । उहाँ एउटा गुटको मात्र सभापति रहेको पुष्टि भएको छ,' कोइरालाले थपे ।
पुस ११ गतेको केन्द्रीय समितिको निर्णय खारेज गर्न माग गर्दै कोइरालाले भने, 'महाधिवेशन कार्यतालिका सच्याएर मंसिरमा ल्याउने, केन्द्रीय समितिले क्रियाशील सदस्यताको छानबिन गर्न ५ सदस्यीय समिति बनाउने र अब विधानविपरीत काम गर्दिन भनेर प्रतिबद्धता जनाउने हो भने सहमति हुन सक्छ ।'
विधानका धारा निलम्बन गर्ने अधिकार उहाँहरूमा कहाँबाट आयो ? - मिनेन्द्र रिजाल
'केन्द्रीय कार्यसमितिले सर्वसम्मत ढंगबाट त विधान परिवर्तन गर्न सक्दैन भने बहुमतको कुरै छोड्नुस्,' उनले लोकान्तरसँग प्रश्न गरे, 'त्यो अधिकार उहाँहरूलाई कहाँबाट आयो ?'
डाक्टर रिजालले नेपाली कांग्रेसको इतिहासमा पहिलोपल्ट महाधिवेशनको विषयमा बहुमत र अल्पमतको मतविभाजन भएको बताए । 'नेपाली कांग्रेसको इतिहासमा महाधिवेशनको विषय बहुमत र अल्पमतमा निर्णय भएको थिएन, तर यसपालि त्यस्तो भयो,' उनले भने, 'एक पक्षको अनुपस्थितिमा उहाँहरूले निर्णय गर्नुभयो । कार्यतालिकाजस्तो विषय त सबैको सहमतिको विषय हो नि !'
'महासमितिले भर्खरै विधान भर्खर पारित गरेको छ,' उनले भने, 'अनि विधानका धाराहरू खारेज गर्दै जानुभएको छ । फजुलमा १९ वटा विभाग थपिएको छ । विधानका धाराहरू निलम्बन गरिएको छ, अनि विधान उल्ट्याइएको छ ।'
डाक्टर रिजालले महाधिवेशनमा भोटको चलखेल गर्न यो सबै गरेको आरोप लगाए । 'सभापतिले यो सबै किन गरिराख्नु भएको छ भन्दा ४७ वटा विभाग बनायो भने २३ सय भन्दा बढी नियुक्ति गर्न पाइन्छ । त्यसपछि तरुण दलमा त्यस्तै नियुक्ति गर्न पाइयो, अनि आचारसंहिता लाग्दैन ?' उनको आक्रोश थियो ।
महाधिवेशन प्रभावित पार्ने काम भयो - प्रकाशमान सिंह
अर्का नेता प्रकाशमान सिंहले सभापति देउवाले अर्को वर्षको फागुनमा पनि महाधिवेशन गर्न नचाहेको आरोप लगाए । 'कथं कदाचित कुनै घटनाका कारण २०७७ को फागुनमा महाधिवेशन नहुने स्थिति आयो भने के हुन्छ ?' सिंहले प्रश्न गरे, 'त्यसैले अहिलेको निर्णय ठीक छैन ।'
सिंहले महाधिवेशनमा चलखेल गर्न भनेर अन्तिम समयमा विभाग गठनको ढोंग रचेको आरोप लगाए । 'विभागमा आफ्ना पक्षका नेताहरूलाई पुरस्कारस्वरूप नियुक्त गरेपछि महाधिवेशन प्रभावित हुँदैन ?' सिंहको प्रश्न छ ।
'उहाँमा जे गरेपनि हुन्छ भन्ने भावना पलाएको छ,' सिंहले भने, 'यो निर्णय करेक्सन हुनुपर्छ । यसका लागि सभापति आफैं अघि सर्नुपर्छ । यसको विकल्प छैन ।'
'मलाई लाग्छ दुवै पक्ष सहमतिमै अघि बढ्नेछ,' लोकान्तरसँग कुरा गर्दै आङदेम्बेले भने, 'सहमतिको प्रयासका लागि दोस्रो पुस्ताका नेताहरूले पहल गरिरहनु भएको छ ।'
'उहाँहरूले नै महाधिवेशनको कार्यतालिका ल्याउनुस् भनेको होइन र ?' उनले प्रश्न गरे, 'महाधिवेशनमा नयाँ नेतृत्व आइहाल्छ नि ! अहिले किन असन्तुष्ट हुनुपर्‍यो ?'
'पार्टीभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर बन्दै गइरहेको छ, यस्तो अवस्थामा बीपीको राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति अझ बढी सान्दर्भिक छजस्तो मलाई लाग्छ,' उनले भने, 'दुवै पक्षले सबै कुरा मैले नै भनेको हुनुपर्छ भन्ने अडान त्याग्नुपर्छ ।'
प्रदेशको नामकरण र स्थायी राजधानी छिट्टै– मुख्यमन्त्री...
अन्यअन्तर्गतका ७ आयोगमा तत्काल प्रमुख र पदाधिकारी नि...